Fako biogas hamahana vahaolana amin'ny famokarana zezika
Na dia nitombo laza aza ny fiompiana akoho amam-borona nandritra ny taona maro, dia asa kely ihany izany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nanjary orinasa matotra io, miaraka amin'ireo tanora mpandraharaha mikendry ny tombony manintona atolotra. Ny isan'ny akoho amam-borona maherin'ny 5 000 izao dia efa fahita ankehitriny fa ny firosoana amin'ny famokarana marobe dia nampitebiteby ny besinimaro ny amin'ny fanariana fako mety. Mahaliana ihany koa ity olana ity ary manome fotoana sarobidy.
Ny famokarana lehibe kokoa dia naneho fanamby maro, indrindra ireo izay mifandraika amin'ny fanariana fako. Ny orinasa madinidinika dia tsy mahasarika ny sain'ny tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana fa ny asa aman-draharaha miaraka amin'ny olana ara-tontolo iainana dia takiana mba hanaraka ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana.
Mahaliana fa ny fanamby amin'ny fako zezika dia manome ny tantsaha ny fotoana hamahana olana lehibe: ny fisian'ny sy ny vidin'ny herinaratra. Any amin'ny firenena afrikanina sasany, indostria maro no mitaraina noho ny halafon'ny herinaratra ary maro ny mponina an-tanàn-dehibe mampiasa mpamokatra herinaratra satria tsy azo itokisana ny herinaratra. Ny fanovana ny zezika ho lasa herinaratra amin'ny alàlan'ny fampiasana biodigesters dia nanjary fahitana manintona ary maro ny tantsaha no mitodika any.
Ny fanovana ny fako zezika ho lasa herinaratra dia mihoatra ny bonus fotsiny, satria ny herinaratra dia entam-barotra tsy fahita firy any amin'ny firenena afrikanina sasany. Mora tantana ny biodigester, ary mitombina ny vidiny, indrindra rehefa mijery ireo tombony maharitra ianao
Ho fanampin'ny famokarana herinaratra biogas, na izany aza, ny fako biogas, vokatra vitan'ny tetikasa biodigester, dia handoto ny tontolo iainana mivantana noho ny habetsany, ny fatran'ny azota amoniaka amnoma sy ny zavatra organika, ary ny sandan'ny fitaterana, ny fitsaboana ary ny fampiasana dia avo. Ny vaovao tsara dia ny fako biogas avy amin'ny biodigester dia manana sanda fanodinana tsaratsara kokoa, koa ahoana no fomba hampiasantsika ny fako biogas?
Ny valiny dia zezika biogas. Ny fako biogas dia misy endrika roa: ny iray dia ranoka (slurry biogas), mitentina eo amin'ny 88% amin'ny totaliny. Faharoa, reside solid (residu biogas), 12% eo ho eo no totaliny. Aorian'ny fitrandrahana ny fako biodigester dia tokony hainganana mandritra ny fotoana maharitra (fanamasinana faharoa) mba hampisaraka ny voa sy ny ranoka ho azy.Mafy - mpampisaraka ranoka azo ampiasaina hanasarahana ny fako biogas residu misy rano sy matevina koa. Ny slurry biogas dia misy singa mahavelona toy ny azota, fosfor ary potasioma, ary koa ireo singa manara-penitra toy ny zinc sy ny vy. Araka ny tapa-kevitra, ny slurry biogas dia misy azota mitentina 0,062% ~ 0,11%, azota amoniôma 200 ~ 600 mg / kg, fosforosy 20 ~ 90 mg / kg, misy potasioma 400 ~ 1100 mg / kg. Noho ny vokany haingana, ny tahan'ny fampiasana otrikaina avo, ary azo tototry ny voly haingana, dia karazana zezika volo hafainganam-pandeha haingana be kokoa. Ny zezika biôgôma mivaingana, singa mahavelona ary slurry biogas dia mitovy ihany, misy 30% ~ 50% zavatra biolojika, 0,8% ~ nitrogen 1,5%, 0,4% ~ 0,6% phosphore, 0,6% ~ 1.2% potassium, nefa koa manankarena humic asidra mihoatra ny 11%. Ny asidra humic dia afaka mampiroborobo ny firafitry ny firafitra mitambatra amin'ny tany, manatsara ny fihazonana ny fitomboan'ny tany sy ny fiatraikany, manatsara ny fananana ara-batana sy simika amin'ny tany, miharihary tokoa ny fiakaran'ny tany Ny toetran'ny zezika tavela biogas dia mitovy amin'ny zezika biolojika ankapobeny, izay an'ny zezika vokarin'ny tara ary misy vokany maharitra indrindra.
Teknolojia famokarana fampiasana biogas slurry hanao zezika ranon-javatra
Ny slurry biogas dia alefa ao anaty masinina fananahana ho an'ny deodorization sy fermentation, ary avy eo ny slurry biogas fermenta dia sarahina amin'ny alàlan'ny fitaovana fisarahana ranoka matevina. Ny ranoka fisarahana dia alefa ao anaty reaktoreran'ny singa miotrika singa ary ny singa zezika simika hafa dia asiana fihetsika manahirana. Ny ranon-javatra mahazaka fanehoan-kevitra dia apetaka amin'ny rafitra fisarahana sy rotsakorana mba hanesorana ireo loto tsy mety ritra. Ny ranoka fisarahana dia arotsaka ao anaty vilany ellevelona chelating, ary ny singa soritry ny voly dia asiana réaction amin'ny chelating. Rehefa vita ny fanehoan-kevitra dia halefa ao anaty fitoerany vita ilay ranoka chelate mba hamenoana ny tavoahangy sy ny fonosana.
Teknolojia famokarana fampiasana ny residu biogas hanaovana zezika organika
Ny sisan'ny biogas nisaraka dia namboarina tamin'ny mololo, zezika mofomamy ary fitaovana hafa notorotoroina tamin'ny habe iray, ary ny atiny hamandoana dia namboarina ho 50% -60%, ary ny tahan'ny C / N dia namboarina ho 25: 1. Ny bakteria fermentation dia ampiana ao anaty akora mifangaro, ary avy eo dia atao antontam-bato ny zezika, ny sakany dia tsy latsaky ny 2 metatra, ny haavony dia tsy latsaky ny 1 metatra, ny halavany tsy voafetra, ary ny tanky Azo ampiasaina koa ny fizotran'ny fermentation aerobika. Tandremo ny fiovan'ny hamandoana sy ny mari-pana mandritra ny fanamasinana mba hitazomana ny aeration ao anaty antontany. Amin'ny dingana voalohan'ny fermentation dia tsy tokony ho latsaky ny 40% ny hamandoana, raha tsy izany dia tsy miteraka fitomboana sy fitomboan'ny zavamiaina bitika ary tsy tokony ho avo loatra ny hamandoana, izay hisy fiantraikany amin'ny rivotra. Rehefa miakatra 70 ℃ ny maripanan'ny antontam-bato, ny milina fanodinana compost tokony hampiasaina hampiodinana ny antontam-bato mandra-pahatongany ho lo tanteraka.
Fanodinana lalina ny zezika organika
Aorian'ny fanamasinana sy fahamatorana ara-nofo dia azonao ampiasaina fitaovana fanaovana zezika biolojika ho an'ny fanodinana lalina. Voalohany, voahodina ho zezika biolojika vovoka izy io. nyfizotry ny famokarana zezika biolojika vovoka dia somary tsotra ihany. Voalohany, potipotehina ilay fitaovana ary avy eo arotsaka amin'ny alàlan'ny amilina fitiliana, ary farany azo vitaina ilay fonosana. Fa ny fanodinana mankanyzezika biolojika granular, sarotra kokoa ny fizotry ny famokarana biolojika granular, ny fitaovana voalohany manapotika, manala ny loto, ny fitaovana ho an'ny granulation, ary avy eo ny sombiny ho an'ny paharitry, hihena, manarona, ary farany hamita ny fonosana. Ny fizotran'ny famokarana roa dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, ny fizotran'ny famokarana zezika vovoka dia tsotra, kely ny fampiasam-bola, mety amin'ny ozinina zezika organika vao nosokafana, nydingana famokarana zezika voajanahary sarotra, avo ny fampiasam-bola, fa ny zezika biolojika granular dia tsy mora ny mampiangona, mety ny fampiharana, avo kokoa ny sandan'ny toekarena.